भक्तपुरको काँडाघाँरीबाट अपहरणमा परेका ११ वर्षीय बालक निशान खड्काको मृत्यु कसरी र किन गरियो भन्ने प्रश्नले घेरिरहेको बेला प्रहरी ईन्काउन्टरबाट अपहरणकारी मारिएसँगै सम्पूर्ण जवाफ सकिएको छ। - Nepali Sandes
अपहरणकारीले मृतक बालककी आमालाई फोन गरेर ४० लाख रूपैयाँ फिरौती माग गरेको विषय अहिले शंकाको घेरामा छ। के सधै चमेलीको पसलमा खाना र खाजा खाने व्यक्तिलाई चमेलीको आर्थिक स्थिति बारे थाहा नहोला र?
फेरि मृतक बालककी आमाले अपहरणकारी भनिएका गोपाल तामाङसँग मोवाइल किन्न पठाउनु यो सानु विषय होइन। यसले पीडित चमेली र दुई अपरणकारीबीच विश्वाशिलो,आत्मिय सम्बन्ध देखिन्छ।
अर्को प्रश्न गोपालले बेलुका आफैं फोन गरेर बालकको बारेमा सोधपुछ गरेको कुरा बाहिर आएको छ। जबकी बालक तिनै अपहरणकारी मध्येका एक गोपालसँग मोवाइल किन्न साँझ बजार गएका थिए।
बालकसँगै गएका व्यक्तिसँग नफर्किदा पीडित आमाले उनीहरुलाई केरकार नगरेकोले पनि यो विषय शंकास्पद देखिन्छ। उता बालकको खोजिमा ज्यान फालेर लागिपरेको प्रहरीले अन्ततः दुई अपहरणकारीलाई ईन्काउन्टरमा यसै भएन उसै भएन भनेझै मारिदिए।
प्रहरीको भनाइमा अपहरणकारीसँग मुठभेड हुँदा इन्काउन्टर गरिएको हो। तर दुई अपहरणकारीलाई प्रहरीले कुट्दै पिट्दै उनीहरु बसेको डेराबाट घिसारेर लगेको घरबेटी साथै स्थानीयले दाबी गरेसँगै यो विषयले ठूलो रूप लिएको छ।
यदी स्थानीयबासी र घरबेटीको कुरालाई लिने हो भने प्रहरीले डेराबाटै पक्राउ गरी लगिएका अपहरणकारी एकाएक जङ्गलमा कसरी पुगे? किन प्रहरीले पक्राउ परेका अपहरणकारीको बयान लिएन? किन उनीहरूलाई सार्वजनिक गरेन? आखिर त्यस्तो के आइलाग्यो प्रहरीमाथि जसले गर्दा अपहरणकारीलाई जङ्गलमा लगेर पेस्तोल हातमा थमाएर गोलि ठोक्नुपर्‍यो। यदि प्रहरीकै भनाइमा जाने हो भने पनि सिधै इन्काउन्टर गर्नुपर्ने स्थिति देखिदैन किनकि, अपहरणकारीका हातमा ५,६ जना एकै चोटि लडाउने हतियार देखिदैन।
प्रहरी टोली पनि अपहरणकारीको खोजीमा जङ्गल पस्दा एक दुई जनाको संख्यामा गएका थिएनन् होला? अपहरणकारीको संख्या प्रहरीलाई पनि त अनुमान नहोला? अर्को विषय प्रहरीले अपहरणकारीलाई एसएमएस गरि पठाएको हुनाले बालक मरेको हुनसक्ने आशंका गरिएको कुरा बाहिर आएका छन्।
प्रहरीले किन एसएमएस पठाउने? प्रहरीको काम डाइरेक्ट एसएमएस पठाउने होकी गुपचुप रूपमा लोकेसन पत्ता लगाउने हो? भनिन्छ, ठूलाठूला घटना हुँदासमेत प्रहरी गुपचुप भै काम गर्नुपर्छ ताकी अपराधीलाई लागोस् म सुरक्षीत छु भनेर। तर, यदी अपराधीलाई उसैको मोवाइलमा एसएमएस गर्दा या भनौ अपराधीको बारेका जानकारी फैलाउँदा खतरा उत्पन्न भइ असुरक्षीत महसुस भइ जे पनि हुने खतरा उत्पन्न हुन्छ।
यस्ता घटना फेरि पनि नदोहोरिउन् भन्नका लागि प्रहरी प्रशासनले सतर्कता अपनाउनुपर्ने देखिएको छ।
अर्को कुरा अपहरणकारीसँग जङ्गलमा मुठभेड भएर प्रहरीले गोली चलायो ठीक छ तर प्रहरीलाई थाहा हुँदैन र कहाँ गोली हान्दा मान्छे मर्छ र कहाँ गोली हान्दा घाइते हुन्छ भनेर?
की प्रहरी चुक्यो यो पक्षमा? यस विषयले प्रहरीमाथि कतिको विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न तेर्साएको छ साथै यस घटनाको तितोसत्य प्रहरीभित्रै चुपचाप रहने देखिएको छ। जसलाई बाहिर निकाल्नु जरूरी छ।
अर्को पक्ष आफ्ना बालबालिकालाई परिवारको सदस्यबाहेक बाहिरि व्यक्तिको विश्वासमा आफूले निगरानि गर्न नसक्ने ठाउँमा पठाउन नहुने कुरामा पनि सचेत रहनु जरूरी देखिएको छ। source:setopati
Wed-Aug-2018, 04:51 am मा प्रकाशित, 113 जनाले हेर्नुभयो